Waxaa jira balaayiin naga mid ah oo ka wareegaya shabakadaha adduunka oo dhan, ugu yaraan saddex meelood meel oo ka mid ah ayaa adeegsada warbaahinta bulshada. Sumcaddaada dhijitaalka ah waa in lagu barto, noloshaada gaarka ah iyo xirfaddaada shaqo labadaba. Inta udhaxeysa Facebook, YouTube, Instagram iyo boggag kale oo fac weyn, dhalinyaro, dhalinyaro waaweyn iyo dad badan oo firfircoon ayaa waqti aad u fara badan halkaa ku qaata. Kulligood kuma wada shaqeeyaan hal ujeedo: qorista, HRDs, la shaqeeyaasha kale ama macaamiisha waxay baaraan, isbarbar dhigaan oo ay hubiyaan astaamaha si loo helo daldaloolo aan had iyo jeer jirin. Saacaddan waa la yaqaan waana tiro wanaagsan ...
Baro sumcaddaada dijital ah Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Baro Maalgelinta Suuqa Suuqa: Koorsada Hordhaca
horeSoo hel xiriirinta xirfadeed
socdaOktoobar 12, 2020 Kordhi mustaqbalkaaga xirfadeed ee CEP Markaad eegto cawaaqibka dhibaatada caafimaad ee suuqa shaqada taas oo sababi karta kororka dib-u-tababbarka iyo dhaqdhaqaaqa, talobixinta horumarinta xirfaddu waxay umuuqataa mid muhiim ah.
Kobcinta habka shahaadada CSPN (shahaadada amniga heerka koowaad)